TOM LASSETER/ ရိုက်တာ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး ● မှန်ကင်းတလှည့်၊ ထင်းတလှည့်
ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) - သဘောင်္ဝင်သွားမှန်း မသိလိုက်
“ ကာတွန်းဓါတ်ရှင် ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ ပြုလုပ်
>Metta Vihara - April - New Year Pwe
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း - မပြောင်းသေးတာက
>Myo Myint Cho - The Hunger
>election isasolution for Burma?
ကာတွန်း ညီပုချေ ● မမြင်ရလို့ပါ
>which media is good for you?
Posts Tagged ‘ TOM LASSETER/ ရိုက်တာ ’
မွတ်စလင်ရှေ့နေတစ်ယောက် လုပ်ကြံခံရမှုမှာ ကြွေမွသွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိပ်မက် TOM LASSETER/ ရိုက်တာ Myanmar Now မှဝေယံဘုန်းဘာသာပြန်ဆိုသည် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကြံပေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မွတ်စလင် ရှေ့နေ...